Companylọ ọrụ anyị nwere ike teknụzụ siri ike, akụrụngwa dị elu, sistemu njikwa njikwa dị elu yana ọrụ azụmaahịa dị elu, na-agbaso “onye ahịa mbụ na-aga n'ihu” nkà ihe ọmụma azụmahịa ma na-ekwusi ike na iguzosi ike n'ezi ihe dị ka ndụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ihe niile maka afọ ojuju ndị ahịa, niile maka mmepe ahụike ogologo oge nke ụlọ ọrụ. N'ime afọ 10 gara aga, anyị na-achịkwa usoro azụmahịa niile, na-elekwasị anya na nkọwa ọ bụla, na-enye ndị ahịa ọrụ gburugburu dị ka ịzụrụ ngwaahịa, R & D, njikwa mma, njikwa ngwa agha na ihe ndị ọzọ, wee bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya. ụlọ ọrụ imekọ ihe ọnụ na onye mmekọ maka ndị ahịa anyị. N'oge anyị, anyị kpụrụ nnukwu iche iche, nnukwu ọnụ ọgụgụ, zuru ezu edemede, nụchara anụcha ogo, kwukwara uru na elu technology ọdịnaya ngwaahịa yinye .There ọtụtụ usoro gụnyere ọgwụ ngwaahịa, nri ọkwa mgbakwunye, ulo oru ọkwa, fatịlaịza ọkwa na ịnweta ngwaahịa.
N'ime afọ ise na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ emeela atụmatụ nke "ịpụ" ike. Anyị ehiwela alaka anyị na Hubei China, Vietnam na Mexico, na-eme ka ahịa ahịa na netwọkụ ahịa anyị dịkwuo mma. Ụlọ ọrụ anyị ga-anọgide na-agbaso usoro nhazi nke ụlọ ọrụ kemịkalụ dị mma n'ọdịnihu na echiche asọmpi nke ngwaahịa dị iche iche na-enweghị ike dochie anya, na-agbalịsi ike ịghọ onye isi nke ụlọ ọrụ kemịkalụ China.
Dịka ụzọ isi jiri akụrụngwa na ozi na-agbasawanye na azụmaahịa mba ụwa, anyị na-anabata atụmanya sitere na ebe niile na webụ na offline. N'agbanyeghị na elu àgwà ihe anyị na-enye, irè na-eju afọ ndụmọdụ ọrụ na-ọnọ site anyị ruru eru mgbe-ire ọrụ otu. A ga-ezigara gị ndepụta ihe na paramita zuru ezu yana ozi ọ bụla ọzọ n'oge maka ajụjụ a. Yabụ biko kpọtụrụ anyị site na iziga anyị ozi-e ma ọ bụ kpọọ anyị mgbe ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nzukọ anyị.